Ny zavatra rehetra ilainao hamoronana fivarotana an-tserasera | vaovao e-varotra
Ny zavatra rehetra ilainao hamoronana fivarotana an-tserasera
hampahery ve ianao mamorona fivarotana an-tserasera? Fantatrao ve izay rehetra ilainao alohan'ny handehananao azy, mandritra ary aorian'izany? Inona no safidinao, Woocommerce, PrestaShop, Shopify…?
Angamba ary tsy toa na inona na inona aminao izany, fa ny marina dia, rehefa mamorona ny eCommerce-nao dia misy lafin-javatra tsy maintsy raisinao. misoroka ny fahadisoana sy ny olana rehefa manomboka ny fivarotana. Hazavainay aminao izy ireo.
1 Inona no tokony hodinihinao alohan'ny hamoronana ny fivarotanao an-tserasera
2 Dingana hamoronana ny eCommerce anao
2.1 Mifidiana dropshipper
2.2 mount the web
2.3 ariana ny vaovao
2.4 Fomba fandoavana
2.5 Tandremo ny toe-draharaha ara-dalàna
Inona no tokony hodinihinao alohan'ny hamoronana ny fivarotanao an-tserasera
Mba hamoronana fivarotana an-tserasera dia misy zavatra roa tena ilaina, hanombohana. Ny iray amin'ireo voalohany dia sehatra iray, izany hoe ny adiresin'ny pejin-tranonkala iray izay ho anaran'ny fivarotanao.
Eritrereto, ohatra, fa hametraka ny fivarotanao "La despensa de Laura" ianao. Tsy maintsy mandeha any amin'ny tranokala mivarotra domains (Google, Name, na amin'ny alàlan'ny orinasa fampiantranoana izay manolotra fivarotana domains ihany koa ianao) mba:
Jereo raha misy izy io.
Ny tolo-kevitray dia izany misafidy isaky ny azonao atao ny .com. Tsy ratsy koa ny .es, fa amin'ny Espaina ihany no hifantoka aminao ary ho sarotra ho azy ireo ny mahafantatra anao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa raha eto amin'ity firenena ity ihany no hivarotra dia tsy hevitra ratsy izany.
Ny teboka manan-danja iray hafa eto dia ny fijerena raha misy tranokala, fivarotana, mpampiasa ... mampiasa io anarana io. Satria mety hampisavoritaka ny olona izany indraindray. Raha azo atao dia tsara kokoa ny mampiasa zavatra tsy mbola ampiasaina (ary raha azo atao dia soraty ny anarana).
Ny zava-dehibe faharoa dia ny fampiantranoana. Izany hoe, ny tsirairay amin'ireo rakitra mandrafitra ny tranokalanao dia hampiantranoana. Ary alohan'ny hanontanianao, tsia, tsy afaka ao amin'ny solosainao izy ireo.
Misy fampiantranoana maro samihafa, ary azonao atao ny mandray na nasionaly na iraisam-pirenena. SAINGY amin'ny maha fivarotana an-tserasera, tsy maintsy mifantoka amin'ny fampifanarahana amin'izany ianao (raha tsy izany dia afaka manome anao olana izy ireo). Ankoatra izany, misy ny sasany mifantoka amin'ny sehatra eCommerce samihafa. Ohatra, a fampiantranoana manokana ho an'ny Raiola PrestaShop.
Nahoana no nampandre anao izahay? Satria raha mahatratra fampiantranoana mifantoka amin'ny sehatra izay hiasanao ianao dia hahomby kokoa noho ny ankapobeny. Ary mazava ho azy, midika izany fa ny safidy fampiantranoana dia mifandraika amin'ny karazana sehatra ampiasainao, satria misy maromaro.
Ohatra, ny hafainganan'ny pejin-tranonkalanao dia miankina amin'io fampiantranoana io, fa koa ny toerana. Mila mahazo antoka ianao fa misafidy fampiantranoana kalitao misy antoka.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, aza misafidy ny mora indrindra na maimaim-poana raha tsy manome anao ny kalitao faran'izay kely indrindra.
Safidy iray hafa, raha tsy te handoa vola amin'ny fampiantranoana ianao, dia ny fampiasana serivisy fivarotana an-tserasera, izay raha tokony hanahy momba izany izy ireo dia omeny anao ny fitaovana rehetra ka tsy maintsy miatrika fivarotana fotsiny ianao.
Dingana hamoronana ny eCommerce anao
Amin'izao ianao manana ny fampiantranoana sy ny sehatra, ireto dingana manaraka ireto dia mety ho mora kokoa na tsy dia mora arakaraka ny traikefanao na raha manana matihanina amin'ny lohahevitra ianao. Amin'ity tranga ity, ny soso-kevitray hamoronana ny eCommerce dia:
Raha tsy fantatrao, ny dropshipper dia karazana mpaninjara na mpivarotra ambongadiny. Izany hoe "trano fanatobiana entana" misy ny vokatra amidinao.
Raha ny marina, afaka mamorona karazana eCommerce roa ianao: ny iray izay anananao ny vokatra hamidy (mila trano fanatobiana entana na efitrano manokana ianao); ary ny iray hafa hoe "contract" orinasa hafa ka rehefa mivarotra zavatra ianao dia alefany.
Ny safidy faharoa dia ahafahanao mivarotra vokatra bebe kokoa avy amin'ny sokajy samihafa ary tsy manahy momba ny fandefasana. Ho takalon'izany dia tsy maintsy mizara tombony ianao na mandoa sara.
Ny fomba tsirairay dia manana ny tombony sy ny fatiantoka, fa ny ankamaroany dia mandeha amin'ny dropshipper.
mount the web
Ny dingana manaraka angamba no sarotra indrindra amin'ny rehetra satria tafiditra amin'ny fananganana ny fivarotanao an-tserasera. Ary eto dia tsy maintsy mamolavola ny pejy fandraisana ianao, fa koa ny vokatra, ny fifandraisana, ny fizotry ny fividianana, sns. Ary izany dia mety hiteraka aretin'andoha maro.
Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny mampiasa môdely mba hitsitsiana fotoana ary indrindra raha tsy manana teti-bola hanaovana azy ho an'ny matihanina ianao. Safidy iray hafa dia ny mamorona azy hatrany am-boalohany, fa raha manana ekipa ao ambadikao ianao dia manoro hevitra azy ihany izahay, satria mety hanimba ny tranokalanao ny fahadisoana kely rehetra.
ariana ny vaovao
Ankehitriny rehefa manana ny môdely ianao ary napetraka ny zava-drehetra, Tsy maintsy manao ny lahatsoratra ianao, na ho an'ny pejy fandraisana na ho an'ny vokatra, fifandraisana, bilaogy, sns.
Mitaky fotoana izany ary indrindra ny fikarohana be dia be. Voalohany, satria tsy maintsy mifantoka amin'ny SEO ianao, izany hoe ny toerana voajanahary mba hahatonga ny mpanjifa hanatona anao.
Fa koa satria tsy maintsy ataonao mahasarika azy ireo hivezivezy eny rehetra eny.
Ohatra, ny fahadisoana ataon'ny maro dia ny fampiasana izay ananan'ny mpaninjara na katalaogy ho an'ny vokatra. Ataovy ny fitsapana, mandika lahatsoratra kely ary mandalo amin'ny Google, ho hitanao fa maro ny fivarotana an-tserasera manana zavatra mitovy.
Raha manavao izany ianao dia mandresy. Aoka hatao hoe mivarotra kidoro ianao. Azonao atao ny milaza ny endri-javatra rehetra ananany, izay raha ny marina, dia hitovy amin'ny fivarotana rehetra. Ahoana anefa raha tsy manome azy ireo mangatsiaka toy izany ianao, fa manao tantara kely iray izay hitantaranao ny maha-azo itokiana sy ny toerana misy azy, ny mafy na ny malefaka, na raha matory ianao ao anatiny.
Ny dingana manaraka tokony hataonao dia manolotra ny fandoavam-bola ambony indrindra azo atao ao amin'ny fivarotanao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy mandoa amin'ny karatra fotsiny, fa manome azy ireo safidy bebe kokoa: famindrana, bisum, PayPal, vola amin'ny livraison... Arakaraky ny omenao azy ireo no tsara kokoa satria ataonao ho mora azo sy hankafizinao izany fividianana izany.
Tandremo ny toe-draharaha ara-dalàna
Raha tsy fantatrao dia tsy "ara-dalàna" ny mivarotra vokatra raha tsy miasa tena na orinasa ianao. Noho izany, mba hifehezana ny olana momba ny andraikitra sivily, dia asaina mamorona orinasa voafetra ianao.
Ny soso-kevitray? Manofa masoivoho iray izay haka ny taratasy rehetra amin'ny filaharana. Assurance koa. Ary miezaha hanaraka ny lalàna manan-kery rehetra mba tsy hahazoana onitra.
Efa manana ny zava-drehetra ianao, ka izao dia tsy maintsy manana izany ianao amboary ny paikady an-tserasera: dokam-barotra, famoronana lahatsoratra, fitantanana ny tambajotra sosialy…
Tsy ho tonga aminao indray alina ny fahombiazana. Fa eny, ao anatin'ny 1 ka hatramin'ny 3 taona. Raha manao izany tsara ianao dia afaka miafara amin'ny tranokala tsara sy fivarotana tsara amin'ny faran'ny volana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovaon'ny ECommerce » eCommerce » Ny zavatra rehetra ilainao hamoronana fivarotana an-tserasera
Computing orinasa: ny fitaovana rehetra ilainao amin'ny tontolo mamokatra kokoa